आजदेखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा, के खुल्छ,के खुल्दैन ? | Himal Times
Home Flash News आजदेखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा, के खुल्छ,के खुल्दैन ?
काठमाडौँ । अहिले बिहान ६ बजेदेखि उपत्यकाभर निषेधाज्ञा लागेको छ । आजदेखि २२ गतेसम्म निषेधाज्ञा लागु हुनेछ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूद्वारा सोमबार नै जारी छुट्टाछुट्टै आदेश अनुसार अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले १५ दिन भनेपनि तत्काललाई ७ दिने सूचना मात्रै जारी भएको हो। अत्यावश्यक अन्तर्गत खाद्य सामग्रीको पसल विहान १० बजेसम्म र बेलुका ५ देखि ७ बजेसम्म खुला हुनेछ । यस्तै डिपार्टमेन्ट स्टोरको ग्रोसरी कक्ष विहान १० देखि बेलुका ५ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ ।
Previous articleहराएका भनिएका सांसदलाइ भेट्न मुख्यमन्त्री अस्पतालमा
Next articleसत्ता जोगाउन जसपाका माग पुरा गर्नतर्फ सरकार, १५ मुद्दा फिर्ता